Yuuniversitiin Miizaan Teeppii barattoonni gara maatiisaaniitti akka galan murteesse - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Feesbuukii Yuuniversitii Miizaan Teeppii
Godina Shakkaa keessatti kan argamu Yuuniversitiin Miizaan Teeppii yaaddoo nageenyaarraa kan ka'e barattoonni gara maatiisaaniitti akka deebi'an murteesse.
Yuuniversitiin kun damee isaa kan magaalaa Teeppii keessatti barattoonni baratan torbee sadiif gara maatiisaanii akka deeman kaleessa beeksisa baaseera.
Barasiisaa Dirribaa Warqinaa Yuuniversitichatti barsiisaa muummee Baayiloojiiti.
Yuunivarsiitichi akka barattoonni gara maatiisaaniitti deebi'an xalayaa baasee marsariitiisaarratti maxxansuusaa nutti himaniiru.
Haalli baruu fi barsiisuu garuu torbee sadiif akka dhaabates BBC'tti himaniiru.
Beeksisa kana sababa godhachuun guyyaa har'aarraa jalqabee barattoonni gara maatiisaanii deebi'uu jalqabaniiru.
Yuuniversiiticha beeksisa baasuusaan durattis barattoonni muraasni nageenya saaniif yaadda'uun gara maatii kan deeman jiraachuusaanii barattoonni dubbisne nutti himaniiru.
Barattoonni qe'eensaanii yuuniversitichatti dhiheenya jiru torbee darbee kaasee gara maatiisaanii deebi'uu dubbatu barattoonni yuunivarsiitichaa nuti dubbisne.
Kanneen fagoorraa dhufan immoo guyyaa har'aarraa eegalee gara maatiisaanii deebi'uu jalqabaniiru.
Koreen MM Abiy dursan 'salphina qormaata biyyaalessaa' qorataa jira
Barattoonni gara maatiisaanii akka deebi'an taasifaman kunneen muraasnisaanii barnoota xumuruun qormaataa seemisteer tokkoffaa osoo hin qormaatamin, muraasni immoo barumsayyuu osoo hin xumurin gara maatiitti deebi'aarra jechuun yaadasaanii ibsu.
Barattoonis osoo yuunivarsitichi kaleessa beeksisa baasuu baatee wiixata booda gara maatiisaanii deebi'uudhaaf murteesanii turan.
Barataa Zamanuu Tazarraa barataa muummee Makaanikaal Injineeriingii waggaa 3'ffaa yoo ta'u bara darbes yaaddoon nageenyaa jira ture, ammas haalli jiru gaarii miti jedha.
"Bara darbes baay'ee jeeqamaa ture. Eegasi ji'oota shan dura gara mooraatti deebinee barachuu jalqabne. Ta'us garuu nageenyi naannochaa ammas amansiisaa miti. Yaaddoo keessatti kan baranoota keenyaa barachaa turre."
''Barnoota sirnaan kan baranne ta'us garuu yeroo qormaata dhuma seemisteer tokkoffaaf torbeen tokko hafu akka hin qoratamne jiraattooni magaalatti nu jeeqan.'' jedha barataan Zamanuun.
Haalli nageenyaa jiru gaarii waan hin taaneef barsiisonni mooraan ala jiraatan gara mooraa dhufanii barsiisuu hin dandeenye jedha barataan kun.
Barsiisonni sana booda magaalatti gad lakkisanii deeman jedha Zamanuun.
''Yeroon qormaata itti qoratamnu irra deddeebiidhaan jijjiiramaa ture. Nutis eega yeroon qormaata itti qormaatamnu jijjiiramee booda torbee sadiif qo'achaa turre, ta'us garuu yeroo jedhame sanatti qormaata dhuma seemisteera kanaa qormaatamuu hin dandeenye.'' jechuun barataan kun BBC'tti himeera.
'Barattootni 68'n Godinaalee Wallaggaarraa dhufuutu wal nu fakkeessa'
Barattuun Burtukaan immoo barattuu mummee Ingineeringii waggaa 2ffaa yoo taatuu hamma haalli jiru jijjiiramuuf gara maatii deebi'aa nuun jechuunsaanii nageenyaa keenyaafis gaariidha jetti.
"Nutis haga haalli nagenyaa fooyya'uuf gara maatii keenyaa deebinee takka turree osoo dhufnee bareeda jedhee yaada. Kanaanis barataan komii qabu jira jedhee hin yaadu," jetti Burtukaan.
Barsiisoonni keenya mooraan ala waan jiraataniif yeroo tokko tokko daandiin ni cufama waan ta'eef gara mooraa dhufanii barsiisuu hin dandeenye.'' jetti barattuun tun.
Nyaata gahaa hin argatan tures jetti.
Gaaffii BBC'n yeroo qormaata itti qormaatamtan al-sadii jijjiiramee ture kun hoo isin irratti dhiibbaa akkamii qaba jedhee barattoota gaafateen barattoonni akkas jedhaniiru: "Irra deddeebiin qo'achaa qormaatamuu dhabuun namatti hin tolu. Nutis osoo yeroodhaan qormaatamnee gara maatii deemnee gaariidha. Keessattuu barattoota fagoorraa dhufaniif ba'aa guddaadha."
''Wanti qo'annellee nu jalaa baduu danda'a waan ta'eef yerioodhaan osoo qormaatamnee bareeda ture. Xiinsammuu keenyaallee miidhaa jira.'' jedhu barattoonni dubbisne kunneen.
''Gara maatii keenyaa akka deebinuuf yuuniversitiin nu deggeraa jira''
Barattoonni dubbisne akka nutti himanitti gara maatiisaaniitti deebisuuf yuuniversitichi deggersa taasisaafii jira.
Barattoota karaa fagoo deemaniif awutoobisiin hamma mooraa dhufee barattoota fuudhuu jalqabeera jedhu barattoonni kunneen.
Mooraadhaan alatti miidhaan akka irra hin geenyeef raayyaan ittisa biyyaa eegumsa taasisaafii jiraachuus dubbatan barattoonni.
Haala nagenyaa Godina Shakkaa...
Godinni Shakkaa eega bulchiinsa komaandi poostii jala galee waggaa tokkoo fi walakkaa caaleera.
Eegasii godinicha keessatti nageenyi waaraa hin jiru jedhan Itti gaafatamaan Waajjira Kominikeeshinii Godinnichaa Obbo Asmaamaawu Hayiluu.
Keessumaayyuu Godina Shakkaa, magaalaa Teeppii fi Aanaa Yekkii keessatti haalli nageenyaa amansiisaa miti jedhu.
Haalli magaalaa Teeppii fi aanaa Yeekki hawaasa naannichaa fi barattoota yuunivarsitii Meezaan Teeppi damee Teeppiitiif yaachisaadha jedhu Obbo Asmaamaawuun.
Akka isaan jedhanitti qaamni hidhatee godinicha keessa socho'u ni jira.
Qaamni hidhate kunis jiraattota doorsisuun, ajjeesuun, hidhuu, bilbilaa fi fuula Feesbuukiirratti doorsisa garagaraa raawwataa jira jedhu qondaalli kun.
Doorsisni qaamni kun qondaaltota godinichaa, seeneetii yuunivarsiitii Miizaan Teeppii fi qaamota mootummaarraan ga'u hamaadha jedhu Obbo Asmaamaawun.
Obbo Asmaamaawun nageenya barattootaaf jecha murteen yuunivarsiitichi dabarse murtee sirriidha jedhu.
Sababni isaas barattoonni osoo doorsifamanii fi dhukaasni rasaasaa jirutti qormaata qormaatamuurra hamma haalli jiru tasgabba'uuf gara maatiisaanii deemuu wayyaaf jedhu.
Qaamoleen hidhatan hawaasa yuuniversitichaa fi seeneetii doorsisaa turan kan jedhan Obbo Asmaammaawu barattoonni qormaataa qormaatu yoo ta'e ni ajjeesna jechaa turan jedhu.
Nutis yaaddoo nageenyaa jiru kana hawaasa naannichaa, poolisii godinnichaa, mootummaa naannoo fi federaalaa waliin taanee fooyyesuuf hojjachaa jirra jedhaniiru.